Xayiraadaha Chiral -RISICOO CDMO Soo-saareyaasha
Products > Xayawaanka Chiral
Nacasnimadu waa hantida geometric ee qaar ka mid ah maadooyinka iyo ion. Qalabka faleebo / iyadoonu waa mid aan shaki ku jirin sawirka muraayada. Joogitaanka xarun jimicsi asimmetrik ah waa mid ka mid ah qaababka qaabdhismeed oo keena dareen dabiici ah oo ku jira maadooyinka organic iyo inorganic ah.
Enkanomers-kii shakhsiyaadka waxaa badanaa loo calaamadiyaa mid midigta ama bidix. Chirality waa tixgelin lagama maarmaan ah marka laga hadlayo stereochemistry ee kiimikada iyo kiimikada. Fikradda waa muhiimada weyn ee wax ku oolka ah maxaa yeelay badi noolaha iyo farmashiyada badankoodu waa shuban.
Qaar badan oo ka mid ah maaddooyinka bayoolojiyadeed ee firfircoon waa jeermi, oo ay ku jiraan dabiiciga ah ee astaamaha ah (dhismooyinka dhismaha ee borotiinka) iyo sonkorta. Nidaamka noolaha, badi ka mid ah xeryahanadan waxay ka kooban yihiin isku miisaan la mid ah: badi amino acids waa levorotatory (l), sonkortuna waxay yihiin daxtrorotatory (d). Cudurrada dabiiciga ah ee caadiga ah waxay ka sameysan yihiin l-amino acids waxayna u yaqaanaan borotiinada bidix; Noocyada d-amino ee naasaha dara ah ayaa soo saara borotiinka saxda ah.
Muuji dhammaan 4 natiijooyinka